जापानी कथा - Koubou Daishi Kukai - जापान च्यानल गाइड
सोमबार, अप्रिल,, २०२१
जापानी किंवदंती - Koubou Daishi Kukai
कुकाइ, मरणोत्तर कोउउ दाइशी (弘法 大師) को नामले परिचित छ, जापानी इतिहासको हियान कालका महान पुरुषहरू मध्ये एक हो। पुजारी, विद्वान, कलाकार र ईन्जिनियर, कुकाई विशाल प्रतिभाको पोलीमाथ थिए र जापान बौद्ध धर्मको शिंगन स्कूलका संस्थापक थिए।
कौउउ दाइशी कुकाइको जन्म ik774 मा शिकोको सुनुकी प्रान्तमा भएको थियो, जहाँ उनी अहिले कागावा हुन्, र अहिले जेन्टसुजी मन्दिरमा हुर्के। उनको जन्म नाम साकी थियो। किंवदन्ती छ कि उनको आमा भारतीय पेटमा प्रवेश गर्ने भारतीय aboutषिको सपना देखेर गर्भवती भइन्।
सत्रौं वर्षको उमेरमा उनी विश्वविद्यालयमा प्रवेश गर्न सफल भए, शास्त्रीय चिनियाँ शिक्षा प्राप्त गरे र त्यसपछि कन्फ्युसियानिज्म र टाओइज्मको अध्ययन जारी राख्न नाराको डाईगाकुरो गए। र उनले यसको स्मृतिलाई आकाशगर्भ मन्त्र.
793 XNUMX In मा, बीस वर्षको उमेरमा, उनले पुजारीको दलमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरे। सुरुमा उनले आफ्नो नाम क्योकैमा परिवर्तन गरे, र त्यसपछि न्योकूमा परिवर्तन भए। अन्तमा, जब उनी पादरीको रूपमा पूर्ण नियुक्त भए, उनले कुकाइको नाम लिए, जुन उनले आफ्नो जीवनभर राखे।
804०XNUMX मा कुकलाई तांत्रिक बौद्ध धर्मको पहिलो ग्रन्थ महावैरोकाना तंत्र बुझ्न र व्याख्या गर्न को लागी अर्को प्रख्यात भिक्षु साईचो (तेन्दै बौद्ध धर्मका संस्थापक) को साथ सरकार द्वारा प्रायोजित अभियानको हिस्साका रूपमा छानिएको थियो। भारतमा पहिलो लेखिएको।
चौबीसौं वर्षमा उनले पुजारीको कार्यका कारणहरू वर्णन गर्दै "तीन शिक्षाको स Ind्केत" (साo्गो शिकी) भन्ने निबन्ध लेखे।
उनले सूत्रको अध्ययन गहन रूपमा गरे तर बुझ्न गाह्रो भयो। उनी असन्तुष्ट भए, उनले जापानमा कसैले सुत्रका केही अंशहरू समेट्न सक्ने कोही पनि भेट्न सकेनन, त्यसैले उनले चीन भ्रमण गर्ने निर्णय गरे जहाँ त्यो पाठ मूल संस्कृतबाट जापानको शास्त्रीय चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरिएको थियो। 804०XNUMX मा उनलाई अनुमति प्राप्त भयो। विदेशमा अध्ययन गर्न अधिकारी।
उनले जापानका राजदूतहरूलाई आधिकारिक मिसनको कम्पनीमा चीनको यात्रा गरे। चिनियाँ राजधानीमा आइपुगेको चार महिना पछि उनी बौद्ध बौद्ध धर्मका गुरु हुइ-कुओको विद्यार्थीको रूपमा स्वीकार भए। अर्को आठ महिनासम्म, हुइ-कुओले कुकाईलाई रहस्यमय बौद्ध सिद्धान्त र अभ्यासमा निर्देशन दिए र उनलाई हेन्जो कोo्गोको धार्मिक नाम दिए जसको अर्थ "अडान्ट युनिवर्सल स्प्लेन्डर" हो। त्यसपछि उनी बत्तीस बर्षे पुरानो भिक्षुको उत्तराधिकारीका रूपमा चुनिए।
उही महिनामा जब उनले कुकाईलाई उनको उत्तराधिकारी नियुक्त गरे, हुइ-कुओले उनलाई भनेः तपाईले मैले भनेको सबै कुरा प्राप्त गर्नुभयो। अब आफ्नो मातृभूमि फर्कनुहोस् र यो आनन्द फैलाउनको लागि मानिसहरुको खुशी बढाउन र पृथ्वीमा शान्ति प्रबर्धन गर्न। Hui-kuo चाँडै पछि मृत्यु भयो।
कुकाइ Japan०806 मा जापान फर्किए। अर्को वर्ष उनी क्योटोको राजधानी गए। उनले अरूलाई हुइ-कुओबाट सिकेका कुराहरू सिकाउने अनुमति पाए र चाँडै नैराको कुमेदरा मन्दिरमा डेनिचि-क्य्योमा उद्घाटन कक्षा दिए, जुन ठाउँमा वर्षौं अघि उसले पाठ फेला पारेको थियो।
उनले मा एउटा मन्दिरको स्थापना गरे माउंट कोया (उच्च 野山) 816१ in। प्रारम्भिक 823२। मा, कुकाईले मन्दिर प्राप्त गरे तोजी (東 寺), क्योटोको प्रवेशद्वारमा अवस्थित एउटा मन्दिर। जब कौउउ दाइशी 42२ वर्षका थिए, उनले रूखमा क्यानन सामको छवि बनाए जुन उनीहरूको महत्वपूर्ण वर्षमा सहयोग पुर्‍याउँदछन्। त्यसबेलादेखि, १२०० भन्दा बढी बर्ष बितिसकेको छ, तर मानिसहरूले अझै पनि कन्नन-साम (भगवान कन्नन) मा विश्वास गरेका छन् र यो ठाउँमा जान्छन्, जुन अब "ताचिकि कन्नन" वा "तचििकी-सान" भनेर चिनिन्छ।
कुकाइको अप्रिल २ 23, 835 मा कोइया पर्वतमा मृत्यु भयो, र यो विश्वास गरिन्छ कि अब पनि उनी आन्तरिक हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो शारीरिक रूप मा अनन्त समाधिमा रहन्छन्। यो विश्वास पनि उसको लागि जनताको उत्कट प्रशंसाको विरासत हो।
कुवासँग सम्बन्धित कुवाहरू र स्प्रि aboutहरूको बारेमा कथाहरू बढि सर्वव्यापी हुन्छन्।
एउटा सामान्य कथा यो हो कि कुनै गाउँमा सिँचाइको लागि पर्याप्त पानी थिएन, त्यसैले त्यहाँका बासिन्दाहरूले टाढाको इनकुवाबाट निकाल्ने पानीमा बचत गर्नुपर्थ्यो। एक दिन, एक यात्रा भिक्षु गाउँ भएर गयो र पानीको गिलासको लागि सोधे। गाउँलेहरूले स्वेच्छाले पानीको गिलास ल्याए जसको कारण यात्रीले धन्यवाद दिएर आफ्नो कर्मीले जमीनमा हिर्काए र पानीको फोहोरा बाहिर निस्कियो। यात्रु वास्तवमै कुकाई थियो।
अर्को कथा कुकाइ र राक्षस अमानोज्यकुको कथा हो हशिगुइ-आईवा रक्स
एक पौराणिक कथा अनुसार भिक्षु कुकाई कुशीमोटो भ्रमण गर्न आएका थिए। उनले चीन ओशिमालाई मुख्य टापुमा जोड्ने पुल निर्माण गर्न राक्षस अमानोजाकूको बिरूद्ध प्रतिस्पर्धा गरे। कुकाइले आफ्नो नयाँ शक्ति प्रयोग गरेर विशाल पुलहरू सागरमा पुर्‍याउन काम गर्न सुरू गरे जुन उनको पुलको आधार बनेको छ। उनले यति अथक परिश्रम गरे कि अमनोज्यकुले महसुस गरे कि उनी हराउन सक्छन्।
त्यसैले शैतानले ठगे
उज्यालो हुनुभन्दा ठीक अघि, अध्यारो हुदाँ, अमनोज्यकुले भाले बास्नाको आवाज निकाल्‍यो। कुकाइले आवाज सुने र सोचे कि उसको समय सकियो। आफूले हराएको सोच्दै, कुकाईले आफ्नो पुल अधूरा समुद्रमा छोड्दै काम गर्न रोके (हशिगुइ-आईवा रक्स).
भगवान कन्नन मा विश्वास
जब एक व्यक्तिलाई समस्या छ, उसले कन्नन-साम (लर्ड कन्नन) को लागी प्रार्थना गर्दछ।
तर जब ऊ गर्दैन, ऊ कन्नन-सामा बिर्सन्छ।
यो समुद्रमा यात्रा को जस्तै छ।
जब मानिस आँधीबेहरीमा पर्छ, उसले जतिसक्दो माथि सहायता माग्छ।
यद्यपि, पानी ऐनामा जत्तिकै सहज हुने बित्तिकै ऊ चिच्यायो कि बिर्सियो।
यो साधारण मानिसहरुको पागलपनको परिणाम हो।
केवल जब उनीहरू संघर्ष गर्दैछन् तिनीहरू कन्नन-साममा खोज्छन्।
हामी आशा गर्दछौं कि तपाई "टाचिकी क्यानन" मा विश्वास गर्नुहुनेछ र खुशी जीवन बिताउनुहुनेछ।
4 /5( 1 मत )
टैग: जापानी संस्कृति, जापान गाइड, जापान, जापान गाइड, जापान, Koubou Daishi कुकाई, kukai, जापानी किंवदन्तीहरु, आकाशगर्भ मन्त्र, 空 大師 空
जापानको झरनाहरु मा विदेशीहरु को फोटो गैलरी
प्लान्ट म्यान - लीफ म्यान प्राran्क्स १az - ओकाजाकी क्यासल - सकुरा
म्यान प्लान्ट फ्यानहरू
कागज फ्यानहरू - ओकाजाकी, आईची
झरनाहरु Gifu पर्यटन आकर्षणहरू छत
हमामासु एबिल जुन माईओ मार्च आकर्षणहरू सकुरा - चेरी खिल Shizuoka घटनाहरू Shizuoka पर्यटन
फूल महोत्सव - हमामात्सु फूल पार्क
एबिल आइची घटनाहरू मार्च मियोशी सकुरा - चेरी खिल
सकुरा बोटागाइके पार्क - मियोशी 「保 田 ヶ 池 公園」